विश्‍वास के हो | साँचो विश्‍वास
“तिनीहरूको देखासिकी गर्नेहरू होओ, जसले विश्‍वास अनि धैर्य गरेर परमेश्‍वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका कुराहरू हासिल गर्छन्‌।”—हिब्रू ६:१२.
१, २. एक जना क्षेत्रीय निरीक्षक बाइबलका विश्‍वासी पात्रहरूलाई कस्तो ठान्छन्‌? बाइबल पात्रहरूलाई साँच्चै हाम्रो साथी बनाउन पाउनु किन राम्रो कुरा हो?
“ओहो! कत्ति राम्रो भाषण! बाइबल पात्रहरूबारे बताउँदा त उहाँ आफ्ना साथीहरूको कुरा गरेझैं गर्नुहुन्छ।” पाको उमेरका एक जना क्षेत्रीय निरीक्षकको भाषण सुनेपछि एउटी बहिनीले यसरी आफ्नो भावना पोखाएकी थिइन्‌। ती बहिनीको कुरा ठीक हो। ती क्षेत्रीय निरीक्षकले परमेश्‍वरको वचन अध्ययन गरेको र त्यसबाट अरूलाई सिकाउन थालेको वर्षौं भइसक्यो। त्यसकारण बाइबलमा बताइएका विश्‍वासी पुरुष र स्त्रीहरूबारे कुरा गर्दा तिनी आफ्ना पुराना साथीहरूको कुरा गरेझैं गर्छन्‌। मानौं तिनी पनि बाइबल पात्रहरू सँगसँगै थिए!
२ बाइबल पात्रहरूलाई साँच्चै हाम्रो साथी बनाउन पाए त कत्ति राम्रो हुन्थ्यो नि, होइन र? तपाईंलाई तिनीहरू साँच्चै आफ्ना साथी जस्तै लाग्छ? तिनीहरूसँगै हिंड्‌न र कुरा गर्न पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो, कल्पना गर्नुहोस्‌। नूह, अब्राहाम, रूथ, एलिया, एस्तरजस्ता व्यक्‍तिहरूसँगै समय बिताउन र तिनीहरूलाई चिन्‍न पाएको भए तपाईंलाई कस्तो लाग्थ्यो? तिनीहरूको अमूल्य सल्लाह सुन्दा र तिनीहरूबाट प्रोत्साहन पाउँदा तपाईंको जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला?—हितोपदेश १३:२० पढ्‌नुहोस्‌।
३. (क) बाइबलमा बताइएका विश्‍वासी मानिसहरूबाट हामी कसरी लाभ उठाउन सक्छौं? (ख) हामी कस्ता प्रश्‍न विचार गर्नेछौं?
३ ‘परमेश्‍वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्नेहरू पुनर्जीवित’ भएपछि बाइबल पात्रहरूलाई हामी साँच्चै नै साथी बनाउन सक्नेछौं। (प्रेषि. २४:१५) तर अहिले पनि ती विश्‍वासी पुरुष र स्त्रीहरूबारे पढेर हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। कसरी? जवाफमा प्रेषित पावल यसो भन्छन्‌: “तिनीहरूको देखासिकी गर्नेहरू होओ, जसले विश्‍वास अनि धैर्य गरेर परमेश्‍वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका कुराहरू हासिल गर्छन्‌।” (हिब्रू ६:१२) विश्‍वासी पुरुष र स्त्रीहरूबारे पढ्‌नुअघि हाम्रो मनमा उठ्‌ने केही प्रश्‍न विचार गरौं: विश्‍वास के हो? यो किन चाहिन्छ? बाइबलमा बताइएका विश्‍वासी मानिसहरूको हामी कसरी अनुकरण गर्न सक्छौं?
विश्‍वास के हो? यो किन चाहिन्छ?
४. थुप्रै मानिसहरूको सोचाइमा विश्‍वास के हो? तिनीहरूको सोचाइ किन गलत हो?
४ विश्‍वास मनै हर्ने एउटा गुण हो। यस किताबमा चर्चा गरिएका मानिसहरूले त्यो मनमोहक गुणलाई अनमोल ठाने। तर साँचो विश्‍वास के हो, आज थुप्रै मानिसहरूलाई पत्तै छैन। कसै-कसैले विश्‍वासलाई कुनै आधार नभएको वा प्रमाणविनाको कुरा भन्ठान्छन्‌। तिनीहरूको सोचाइ सरासर गलत हो। साँचो विश्‍वास गर्नु र कुनै कुरा अन्धाधुन्ध पत्याउनुमा धेरै फरक छ। साँचो विश्‍वास एक किसिमको भावना मात्र होइन; कुनै कुरा पत्याउनु मात्र पनि होइन। अन्धाधुन्ध पत्याउनु खतरनाक छ। भावना भन्‍ने कुरा उर्लेर आउँछ र फेरि बिलाइहाल्छ। परमेश्‍वरलाई विश्‍वास गर्नु भनेको उहाँ हुनुहुन्छ भनेर मानिलिनु मात्र होइन। किनभने परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनेर त “दुष्ट स्वर्गदूतहरू पनि विश्‍वास गर्छन्‌ अनि थरथर काँप्छन्‌।”—याकू. २:१९.
५, ६. (क) हामीले देख्न नसक्ने कुन दुईवटा मूल कुरामा हाम्रो विश्‍वास आधारित छ? (ख) हाम्रो विश्‍वासको जग कत्तिको बलियो छ? उदाहरण दिनुहोस्‌।
५ साँचो विश्‍वास र अन्धाधुन्ध गरिएको विश्‍वासमा धेरै फरक छ। विश्‍वासबारे बाइबलमा के लेखिएको छ, याद गर्नुहोस्‌। (हिब्रू ११:१ पढ्‌नुहोस्‌) विश्‍वासमा हामीले देख्न नसक्ने दुईवटा मूल कुरा हुन्छन्‌ भनेर पावलले बताए। पहिलो: विश्‍वास अहिले भइरहेका तर हामीले ‘देख्न नसक्ने’ वास्तविकताहरूमा आधारित हुन्छ। स्वर्गका कुरा हाम्रो आँखाले कसरी देख्न सक्छ र? जस्तै: यहोवा परमेश्‍वर, येशू ख्रीष्ट र स्वर्गमा अहिले शासन गरिरहेको राज्य। दोस्रो: विश्‍वास “आशा गरिएका कुराहरू”-मा आधारित छ, जुन अहिले पूरा भइसकेका छैनन्‌। जस्तै: परमेश्‍वरको राज्यले पृथ्वीलाई प्रमोदवन बनाउने कुरा अहिले पूरा भइसकेको छैन। त्यसोभए हामीले नदेखेको वास्तविकता र आशा गरेको कुराको कुनै आधार नै छैन त?
६ त्यस्तो कहाँ हो र! साँचो विश्‍वासको जग बलियो हुन्छ भनेर पावलले बताए। पावलको भनाइअनुसार विश्‍वास गर्नु भनेको कुनै कुरा ‘पक्कै पूरा हुनेछ भनेर पर्खनु’ हो। तिनले यसो भन्दा “लालपुर्जा” भन्‍ने अर्थ पनि लाग्ने वाक्यांश प्रयोग गरे। मानिलिनुहोस्‌, तपाईंलाई कसैले एउटा घर दिने भयो। त्यो व्यक्‍ति तपाईंकहाँ आउँछ र तपाईंको नाममा लेखिएको लालपुर्जा दिंदै यसो भन्छ, “लिनुस्‌, तपाईंको घर।” त्यो व्यक्‍तिले त्यसरी लालपुर्जा दिनुको अर्थ तपाईंको घर त्यो कागजको टुक्रा हो, त्यसैमा बस्नुस्‌ भनेको त होइन। त्यसको अर्थ, लालपुर्जा एउटा यस्तो कानुनी प्रमाण हो, जुन तपाईंसँग छ भने घर नै भएसरह हो। त्यसैगरि हामीले जुन कुरामा विश्‍वास गरेका छौं, ती कुराको पनि यत्ति भरपर्दो र यत्ति बलियो प्रमाण छ कि त्यो हामीले विश्‍वास गरेको चीज बराबरै हो।
७. साँचो विश्‍वासमा के-कस्ता कुरा हुन्छन्‌?
७ साँचो विश्‍वास पहिला पूरा भएका कुराको जगमा अडिएको हुन्छ। साँचो विश्‍वास स्थिर हुन्छ र यहोवा परमेश्‍वरतर्फ केन्द्रित हुन्छ। यहोवा परमेश्‍वरलाई आफ्नो मायालु बुबा ठान्‍न त्यस्तो विश्‍वासले हामीलाई मदत गर्छ। त्यही विश्‍वासले गर्दा नै यहोवा परमेश्‍वरले गरेका प्रतिज्ञाहरू पूरा हुनेछन्‌ भनेर हामी पक्का हुन सक्छौं। साँचो विश्‍वास यति मात्र त होइन, यसमा अझ धेरै कुरा छन्‌। कुनै जीवित प्राणीलाई जस्तै विश्‍वासलाई बचाइराख्न पनि पोषण चाहिन्छ। विश्‍वास कामद्वारा देखाएको हुनै पर्छ, नत्र यो मर्छ।—याकू. २:२६.
८. विश्‍वास किन महत्त्वपूर्ण कुरा हो?
८ विश्‍वास किन महत्त्वपूर्ण कुरा हो? पावलले सशक्‍त ढङ्‌गमा यसको जवाफ दिए। (हिब्रू ११:६ पढ्‌नुहोस्‌) विश्‍वास छैन भने हामी यहोवा परमेश्‍वरको नजिक हुन सक्दैनौं र उहाँलाई खुसी बनाउन पनि सक्दैनौं। मानव जीवनको सबैभन्दा उत्तम लक्ष्य हासिल गर्नको लागि हामीलाई विश्‍वास नभई हुँदैन। त्यो लक्ष्य हो: स्वर्गमा बस्ने हाम्रो बुबा यहोवासित घनिष्ठ हुनु र उहाँको महिमा गर्नु!
९. हामीलाई विश्‍वास नभई हुँदैन भन्‍ने कुरा यहोवा परमेश्‍वरलाई थाह छ भनेर उहाँले कसरी देखाउनुभएको छ?
९ विश्‍वास हामीलाई नभई नहुने कुरा हो भनेर यहोवा परमेश्‍वरलाई थाह छ। त्यसैले विश्‍वास कसरी बढाउने र त्यसलाई कसरी बलियो पार्ने भनेर उहाँ हामीलाई उदाहरण दिएर सिकाउनुहुन्छ। मण्डलीमा नेतृत्व लिने विश्‍वासी मानिसहरू हाम्रो लागि आशिष्‌ हुन्‌। परमेश्‍वरको वचन हामीलाई यसो भन्छ: “तिनीहरूको विश्‍वासको अनुकरण गर।” (हिब्रू १३:७) त्यति मात्र होइन उहाँले हामीलाई अझ धेरै उदाहरण दिनुभएको छ। पुरातन समयमा विश्‍वासको उत्कृष्ट उदाहरण बसालेका पुरुष र स्त्रीहरू मिलेर बनेको “साक्षीहरूको . . . बाक्लो बादल” छ भनेर पावलले बताए। (हिब्रू १२:१) पावलले बताएका विश्‍वासी व्यक्‍तिहरूको नाम हिब्रू अध्याय ११ मा लेखिएको छ। त्यहाँ उल्लेख गरिएका बाहेक विश्‍वासी व्यक्‍तिहरू अरू पनि छन्‌। वास्तवमा बाइबलका पाना विश्‍वासी व्यक्‍तिहरूको साँचो जीवनकथाले भरिएको छ। विश्‍वासी पुरुष र विश्‍वासी स्त्रीहरूको कथा, विश्‍वासी जवान र विश्‍वासी वृद्धहरूको कथा। तिनीहरूले विभिन्‍न कष्ट भोग्दै जीवनका उकाली-ओराली पार गरे। तिनीहरू जीवनको अन्तसम्मै विश्‍वासी भए। अहिलेको अविश्‍वासी संसारमा तिनीहरूको बलियो विश्‍वासले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ।
हामी कसरी अरू विश्‍वासी मानिसहरूको अनुकरण गर्न सक्छौं?
१०. बाइबलमा उल्लेख गरिएका पुरुष र स्त्रीहरूको विश्‍वासको अनुकरण गर्न व्यक्‍तिगत अध्ययनले हामीलाई कसरी मदत गर्छ?
१० कुनै व्यक्‍तिको नक्कल गर्न तपाईंले उसलाई नजिकैबाट नियाल्नुपर्छ। बाइबलमा बताइएका विश्‍वासी पुरुष र स्त्रीहरूको साँचो कथा यस किताबमा पढ्‌दै जाँदा तिनीहरूबारे कत्ति धेरै खोजतलास गरिएको रहेछ भनेर तपाईंले बुझ्नुहुनेछ। तपाईंले तिनीहरूलाई राम्ररी नियाल्न सकोस्‌ भनेर नै त्यसो गरिएको हो। तपाईं पनि तिनीहरूबारे अझै खोजेर हेर्नुहोस्‌ न! व्यक्‍तिगत अध्ययन गर्दा तपाईंसँग भएका प्रकाशनहरूको मदत लिएर बाइबललाई अझै गहिरोसँग खोतल्नुहोस्‌। आफूले पढेका कुरामा घोरिंदा त्यहाँको ठाउँबारे कल्पना गर्नुहोस्‌; त्यहाँको पृष्ठभूमि कस्तो थियो, सोच्नुहोस्‌। त्यहाँको दृश्‍य आँखामा उतार्नुहोस्‌; कस्ता-कस्ता आवाज निस्कन्छन्‌, सुन्‍नुहोस्‌; त्यहाँको बास्ना सुँघ्नुहोस्‌; यसरी कल्पिनुहोस्‌, मानौं तपाईं त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, बाइबलको त्यस विवरणमा भएका मानिसहरूको भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्‌। जब तपाईं ती विश्‍वासी पुरुष र स्त्रीहरूको भावना महसुस गर्नुहुन्छ, तब तपाईंलाई तिनीहरू अझै वास्तविक लाग्नेछ, तिनीहरूलाई देखेझैं लाग्नेछ। कसै-कसैको बारेमा त तपाईंलाई यस्तो पनि लाग्न सक्छ—ओहो! मेरो प्यारो र पुरानो साथी!
११, १२. (क) अब्राहाम र सारासँग तपाईं कसरी अझ नजिक महसुस गर्न सक्नुहुन्छ? (ख) हन्‍ना, एलिया र शमूएलको विवरणबाट तपाईं कसरी लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ?
११ तिनीहरूलाई राम्ररी चिनिसकेपछि तिनीहरूको अनुकरण गर्ने इच्छा तपाईंमा जाग्छ। एकछिन सोच्नुहोस्‌, तपाईंलाई एउटा नयाँ जिम्मेवारी दिइँदैछ। यहोवाको सेवामा थप योगदान दिन सङ्‌गठनले तपाईंलाई निम्तो दियो। प्रचार गर्न अझ धेरै प्रकाशक चाहिएको ठाउँमा तुरुन्तै जान तपाईंलाई आग्रह गरिएको हुन सक्छ। अथवा आफूले कहिल्यै नगरेको तरिकामा वा अप्ठ्यारो लाग्ने किसिमको प्रचारकार्यमा भाग लिन निम्तो दिइएको हुन सक्छ। यस्तो जिम्मेवारी पाउँदा तपाईं घोरिनुहुन्छ र यसबारे प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यतिबेला अब्राहामको उदाहरणबारे सोच्दा तपाईं मदत पाउन सक्नुहुन्छ कि? अब्राहाम र सारा ऊरको सुविधा-सम्पन्‍न जीवन छोडेर जान तयार भए, बदलामा तिनीहरूले प्रशस्त आशिष्‌ पाए। तिनीहरूको अनुकरण गर्नुभयो भने तपाईंले तिनीहरूलाई पहिलाभन्दा झनै राम्ररी चिन्‍नुहुनेछ।
१२ अर्कोतर्फ यसरी सोच्नुहोस्‌, तपाईंको नजिकको व्यक्‍तिले तपाईंलाई नराम्रो व्यवहार गऱ्‍यो र तपाईं निराश हुनुभयो। सभामा जानै मन लागेन। अब तपाईं के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो बेला हन्‍नाको उदाहरण विचार गर्नुहोस्‌। पनिन्‍नाको नमीठो व्यवहारले यहोवाको उपासना गर्न हन्‍नालाई बाधा पुऱ्‍याएन। यसबारे सोच्दा तपाईंले पनि सही निर्णय गर्न मदत पाउनुहुनेछ। त्यसपछि तपाईं यस्तो महसुस गर्नुहुनेछ—मेरी प्यारी साथी हन्‍ना! त्यसैगरि तपाईंले आफूलाई निकम्मा महसुस गर्नुभएको छ भने एलियाको विवरण विचार गर्नुहोस्‌। तिनलाई परेको समस्या र यहोवाले तिनलाई सान्त्वना दिनुभएको तरिका मनन गर्नुभयो भने एलिया पनि तपाईंको प्यारो साथी बन्‍नेछन्‌। आज थुप्रै जवानहरूलाई अनैतिक जीवन बिताउने साथीहरूबाट अनेक किसिमको दबाब आइपर्छ। त्यस्तो बेला शमूएलको विवरण मदतकारी हुन सक्छ। तिनी एलीका छोराहरूको खराब प्रभावबाट कसरी जोगिए भनी विचार गर्दा शमूएल ती जवानहरूको नजिकको साथी बन्‍नेछन्‌।
१३. बाइबलमा उल्लेख गरिएका व्यक्‍तिहरूको विश्‍वासको उदाहरण अनुकरण गर्दा तपाईंको आफ्नो पहिचान गुम्छ र? किन?
१३ बाइबलमा उल्लेख गरिएका यस्ता व्यक्‍तिहरूको विश्‍वासको उदाहरण अनुकरण गर्दा यहोवाको नजरमा तपाईंको विश्‍वासचाहिं कम महत्त्वको देखिने हो कि? कदापि होइन। नबिर्सनुहोस्‌, विश्‍वासी मानिसहरूको अनुकरण गर भनेर यहोवाको वचनले हामीलाई प्रोत्साहन दिएको छ। (१ कोरि. ४:१६; ११:१; २ थिस्स. ३:७, ९) यस किताबमा हामी विभिन्‍न व्यक्‍तिहरूबारे छलफल गर्नेछौं। तीमध्ये कतिपयले त आफूभन्दा पहिलेका विश्‍वासी व्यक्‍तिहरूको अनुकरण गरेका थिए। अध्याय १७ मा हेर्ने हो भने मरियमले हन्‍नाका शब्दहरूलाई नै दोहोऱ्‍याइन्‌। यसबाट प्रस्ट हुन्छ, मरियमले हन्‍नाको उदाहरण अनुकरण गरिन्‌। त्यसोभए मरियमको विश्‍वास हन्‍नाको भन्दा कमजोर थियो त? थिएन। बरु, हन्‍नाको उदाहरणबाट मरियमले आफ्नो विश्‍वास अझै बलियो बनाउन सकिन्‌ र यहोवाको नजरमा छुट्टै पहिचान बनाउन तिनी सफल भइन्‌।
१४, १५. यस किताबमा के-कस्ता मदतकारी कुराहरू छन्‌? हामी कसरी यसको सदुपयोग गर्न सक्छौं?
१४ तपाईंको विश्‍वास अझै बलियो बनाउन मदत मिलोस्‌ भनेर यो किताब तयार पारिएको हो। यसपछिका अध्यायहरू प्रहरीधरहरा-मा प्रकाशित “तिनीहरूको विश्‍वास अनुकरण गर्नुहोस्‌” शीर्षकका शृङ्‌खलाबद्ध लेखहरूबाट लिइएका हुन्‌। ती लेखहरूमा छाँटकाँट गरिनुका साथै केही नयाँ कुरा पनि थपिएका छन्‌। छलफल गर्न र सिकेको कुरा लागू गर्न सजिलो होस्‌ भनेर प्रत्येक अध्यायमा प्रश्‍नहरू दिइएका छन्‌। यसमा थुप्रै रङ्‌गीन चित्रहरू थपिएका छन्‌ र कुनै-कुनै चित्रहरूलाई अझै ठूलो बनाइएको छ। यस किताबका अरू मदतकारी पक्षहरू हुन्‌, ऐतिहासिक कालक्रम र नक्साहरू। तिनीहरूको विश्‍वास अनुकरण गर्नुहोस्‌ किताब व्यक्‍तिगत अध्ययनको लागि, पारिवारिक उपासनाको लागि र मण्डलीमा अध्ययन गर्नको लागि तयार पारिएको हो। यस किताबमा भएका लेखहरू परिवार मिलेर ठूलो स्वरमा पढेमा मात्रै पनि तिनीहरूले लाभ उठाउनेछन्‌।
१५ विगतमा यहोवाको सेवा गरेका वफादार सेवकहरूको विश्‍वासको अनुकरण गर्न यस किताबले तपाईंलाई मदत पुऱ्‍याओस्‌। तपाईंको विश्‍वास बलियो होओस्‌ र स्वर्गमा बस्ने बुबा यहोवासँग तपाईंको सम्बन्ध घनिष्ठ होओस्‌।
तिनीहरूको विश्‍वास अनुकरण गर्नुहोस्‌—परिचय